Mpanamboatra sy mpamatsy ny rafitra fitsaboana rano Water China RO pharmaceutika | IVEN
Fitsaboana rano amin'ny fanafody - PW / WFI / PSG
Reverse osmosis dia ny valopolo taona namolavola teknolojia manasaraka ny membrana, izay mampiasa indrindra ny fotokevitra permeation membrane semipermeable, mba hanomezana azy fomba iray amin'ny alàlan'ny fanerena ny fitarihana fidirana voajanahary voajanahary amin'ny herin'ny rano ao anaty vahaolana mifangaro hanalefaka ny vahaolana hiditra ity fomba ity dia antsoina hoe osmosis mihodina. Amin'ny alàlan'ny singa ao amin'ilay fitaovana dia ny osmosis reverse osmosis unit.
Osmosis iray voalohany, fiomanana roa + EDI (toetran'ny fizotran'ny rano voadio)
1 Mety amin'ny masiran'ny ranon-javatra raha oharina amin'ny faritra avo;
Ny fitarihan-drano rano 2 vokatra dia tsara kokoa;
Fampiasam-bola 3 indray mandeha kely kokoa;
4 ny vidin'ny asa ambany kokoa;
Famokarana rano (m³ / h)
Rano kely indrindra (m³ / h)
Rano voakolokolo (%)
Miasa mari-pana (℃)
Generator etona madio
1.Vitaina arakaraka ny mason'ny JB20031-2004 Pure Steam Generator, ny mpamokatra etona madio LCZ anay dia mampiasa fanafanana etona hamokarana etona madio tsy misy loharano nafana. Ny generator dia azo ampiharina amin'ny fanamorana ary azo atao tsara ny misoroka ny fandotoana faharoa izay vokatry ny vy mavesatra, ny loharanon'ny hafanana ary ny antontam-bato maloto hafa. Ny fitaovana dia miavaka amin'ny haitao mandroso, famolavolana tsy manam-paharoa, firafitra mifangaro, fanamafisana tsara ary fitehirizana hafanana tsara ho an'ny akorany, izay mitondra fihenan'ny hafanana ambany, fahombiazan'ny hafanana ambony kokoa, fandrakofana habakabaka ambany kokoa, fampandehanana ary fametrahana mora ary fanitsiana tsara. Ny generator antsika dia manaraka ny mason-tsivana GMP an'ny Fanjakana ary efa niasa betsaka tamin'ny fanamorana ny fikarakarana ara-pahasalamana, fanafody ary indostrian'ny sakafo.
2. Ampahany ampahany: loharano misy rano sy fantson-drano manadio ny haavon'ny rano
Ny tank dia manafana ny rano deionized amin'ny alàlan'ny etona avy amin'ny vilany mba hiteraka setroka madio madio. Ny preheater sy ny evaporator an'ny tank dia mampiasa ny fantsom-by tsy misy fantsona matevina mahery ary miaraka amin'ny famindrana hafanana tsara. Ny tanky dia afaka manitsy ny fidiran'ny rano mandeha ho azy arakaraka ny hafanan'ny etona ao anaty vilia mba hampitomboana ny fivoahan'ny setroka madio. Ankoatr'izay, ny etona misy fahadiovana avo lenta miaraka amin'ny backpressure sy ny tahan'ny mikoriana dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny valizy mivoaka.
3. Ity fitaovana ity dia misy amina karazany telo, izany hoe automation automatique, semi-automation ary fiasa amin'ny tanana mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa samihafa.
Famokarana etona madio(L / h)
Fanjifana etona fanafanana(kilao / h)
Fanjifana rano voadio(kilao / h)
Ny distilator rano misy effets LD dia novolavolaina sy novokarina araky ny mason'ny GB150-1998 Steel Pressure Vessel sy JB20030-2004 Multi-effets Distillator-drano. Ny singa sy ny ampahany amin'ny fitaovana rehetra dia vita amin'ny vy vy 304 na 316L. Ny rano namboarina namboarina avy amin'ny distillator rano dia madio fahadiovana ary tsy misy loharano hafanana, izay mifanaraka tanteraka amin'ny mari-pamantarana kalitaon'ny rano amin'ny tsindrona voalaza ao amin'ny Pharmacopoeia sinoa (fanontana 2010). Ity fitaovana ity dia manaporofo fa safidy mety indrindra ho an'ireo mpanamboatra fanafody toy izany, toy ny vokatra ra isan-karazany, tsindrona ary vahaolana amin'ny fampidirana, mpiasan'ny biolojika biolojika ary koa rano fisotro madio.
1. Ity fitaovana ity dia misy amina karazany telo, izany hoe automation automatique, semi-automation ary fiasa amin'ny tanana mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa samihafa.
2. Ny distilator rano misy effets enina mahery dia tsy mila manampy rano mangatsiaka.
Famokarana rano (L / h)
fanjifana etona (kilao / ora)
fanjifana rano manta (kg / h)
refy drafitra (mm)
Rafitra fitsaboana EDI rano voadio
1.Rosse osmosis dia karazana teknolojia fisarahana amin'ny membrane novolavolaina nanomboka ny taona 1980.
2.Izany indrindra dia mampiasa ny fitsipika osmosis raha membrane semi-mangarahara. Tsindry antsoina hoe osmosis mihodina.
3.Ny fitaovana izay misy singa osmosis miverimberina dia antsoina hoe fitaovana osmosis mihodina.
Osmosis ambaratonga voalohany sy faharoa + EDI
1. ampiharina amin'ny faritra izay avo ny sira ny sira;
2.Ny fitondra herinaratra tsara amin'ny rano vokarina;
4.Lavo miasa ambany;
1. Famolavolana modularity, firafitra matevina.
2. Ny rafitra dia afaka misafidy membrane RO desinfection thermal sy EDI famonoana hafanana; ny rafitra iray manontolo dia afaka mahatsapa ny famonoana rano mafana amin'ny Internet.
3. Ny malefaka roa sosona dia afaka mahazo fifandraisana amin'ny andian-dahatsoratra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny vondrona valizy sy ny taranaka mandimby.
4. paompin-drano famahanana. Paompin-tseranana avo lenta dingana voalohany sy paompy faneriterena avo lenta 2ème dia fehezin'ny fatra matetika.
5. Ny famokarana rano terminal terminal dia mampiasa maody famatsiana roa
6. Ampiasao ny tanky fitehirizana rano afovoany ho toy ny tanke buffer mba hahatsapany ny fanadiovana an-tserasera, amin'ny alàlan'ny rafitra fanadiovana misaraka.
7. Ny fanaovana fantsom-by vy tsy miolakolaka mivantana ao anaty fantsona araka izay tratra, alaviro ny welding.
8. Ho an'ny fampifandraisana ny fantsom-panafody sy ny kojakoja fanampiny, dia mandray ny arc izy mba hiarovana ny lalamby mandeha ho azy, ary hiantohana ny kalitaon'ny welding
9. Rafitra fanaraha-maso: teknolojia fanaraha-maso mandeha ho azy PLC
10. Fomba fandraisam-peo: azonao atao ny misafidy ny recorder tsy misy taratasy ho an'ireo firaketana tsy misy taratasy ary koa ilay taratasy dia mirakitra ireo masontsivana manan-danja amin'ny tena izy.
Vokatry ny rano (m3 / h)
Fidiran-drano farafahakeliny (m3 / h)
Rano maina (%)
Mpandika rano (° C)
Previous: Efitra Madio
Manaraka: Kitapo fitehirizana